श्रावण ४, २०७६ ०३:१३:१६
नायीका केकीको फिटनेसको रहस्य यस्तो.. श्रावण ३, २०७६
बाजुरामा जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु श्रावण ३, २०७६
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जिम्बावेलाई आईसीसीको निलम्बन श्रावण ३, २०७६
मासु खाँदा स्वास्थ्य समस्या भयो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? अब यसरी खानुस् खाने तरिका मिलाएर खान सके स्वास्थ्य लागि राम्रो मानिन्छ । तर मनलाग्दी खाएमा त्यसले शरीरलाई हानी पुर्‍याउँछ। एउटा जवान मान्छेले एक दिनमा २५० ग्रामसम्म मासु खान राम्रो हुन्छ। मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ। दुई सय ५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखि ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ। थप प्रोटिन अन्य खानाबाट पाइन्छ। श्रावण ३, २०७६
भारतमा चर्चित बाल कलाकारको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भारतमा एक चर्चित बाल कलाकारको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । १४ वर्षका शिवलेख सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो । छत्तीसगढको रायपुरमा उनको कार एक ट्रकसँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो । श्रावण ३, २०७६
होटेलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला दाङको तुलसीपुरस्थित मानसरोवर होटेलमा कोहलपुरका एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बाँकेको कोहलपुर निवासी २७ वर्षीय रमेश हमालको शव होटेलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । श्रावण ३, २०७६
बाढी, पहिरो र डुबानबाट ९० हजार घरपरिवार प्रभावित ... मनसुन शुरु भएपछि बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट देशका विभिन्न जिल्लाका ९० हजार परिवारका करीब चार लाख ५२ हजार मानिस प्रभावित भएको मानवीय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रारम्भिक अनुमान लगाएको छ । श्रावण २, २०७६
सुनको मूल्य बढयो केही समय स्थिर रहेको सुनचाँदीको मूल्य बिहीबार फेरी बढेको छ । एकैदिन सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई छ । महासंघका अनुसार फाइन गुणस्तरको सुनको करोबार ६५ हजार रुपैयाँमा भएको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य ६४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । श्रावण २, २०७६
२ अंकले घट्यो नेप्से शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से घटेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन उत्साहजनक रुपमा बढेको शेयर परिसूचक नेप्से दोस्रो दिन भने घटेको छ । कारोबार सुरु भएपछि केही समय बढेको बजार बन्द हुँदा सम्म २ अंकल बढीले घटेको छ । श्रावण २, २०७६
बालीमा रातो विकिनीमा मस्त खुलेकी साम्राज्ञी इन्स्टामा भाइरल ( ८ तस्वीरसहित) नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अहिले मस्ती मुडमा छिन् । उनी, दुई चलचित्रको छायांकन सकिएपछि मस्ती मुडमा देखिएकी हुन् । २ चलचित्रको छायांकन सकेपछि आराम गर्न भन्दै उनी केही महिना चलचित्र नखेल्ने सोचमा छिन् । श्रावण २, २०७६
स्टे अर्डर नै निस्क्रिय पारेर हेटौंडा बजारका घर भत्काउने तयारीमा डिभिजन सडक डिभिजन सडक कार्यालयले २५ मिटर सडक फराकिलो पार्ने अभियान हेटौंडा बजारले नअड्काउने बताएको छ । सडक ऐन २०३१ अनुसार २५ मिटर सडकसिमा भित्रपर्ने घर टहरा सबै भत्काएर तोकिएको सडक कायम गरेरै छोड्ने बताएको छ । हेटौंडाका मुख्य बजारका घरधनीले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि तत्कालका लागि घर भत्काउन भने समस्या देखिएको छ । उता मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले २५ मिटर भत्काउन नपाइने भन्दै विभिन्न ठाउँमा धाइरहेको छ । श्रावण २, २०७६
यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा || जानिराखौ यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् । पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ? कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ? श्रावण २, २०७६
जबर्जस्ती करणीका फरार एक जना पाँच वर्षपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा जबर्जस्ती करणी मुद्याका एक जना फरार पाँच वर्षपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । श्रावण २, २०७६
हेटौंडाबाट लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ मकवानपुर प्रहरीले हेटौँडाबाट लागुऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१७ रामनगर बस्ने ४० वर्षीय टीकाराम सार्की र सोही ठाउँका ४५ वर्षीय ताराबहादुर भुजेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । श्रावण २, २०७६
पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी छनोट कमिटीका प्रमुख इन्जमामले सम्झौता नविकरण नगर्ने पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका छनोट प्रमुख इन्जमाम उल हकले सम्झौता नविकरण नगर्ने भएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व कप्तानसमेत रहेका इन्जमामले एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा टोलीको नतिजापछि आफू छनोट प्रमुखका रुपमा थप समय रहने मनस्थितीमा नरहेको बताएका छन्। श्रावण २, २०७६
चाहेर पनि यी चार कुरा स्त्री या पुरुषले कहिले लुकाउन सक्दैनन् भनिन्छ नि- ‘एउटा झूट कुरा लुकाउन हजार झूट बोल्नुपर्छ!’ फेरि त्यहि झूटलाई पनि कहाँ धेरै दिनसम्म लुकाउन सकिन्छ र? आज जसरी तसरी सत्य कुरा लुकाइएला, तर कुनै न कुनै दिन त सत्य सामुन्ने आइ नै हाल्छ। अनि जब घर-परिवार र समाजले त्यो सत्य कुरा थाहा पाउँछन्, तब सबैको सामुन्ने अपमानित हुनुपर्छ। तीतो नै किन नहोस् सत्य कुरा लुकाउँदा झन् कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। श्रावण २, २०७६
एनिमेशन स्टुडियोमा लगाइएको आगोमा परेर जापानमा १० को मृत्यु जापानको क्योटो शहरस्थित एक एनिमेशन स्टुडियोमा अज्ञात व्यक्तिले आगो लगाउँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ । श्रावण २, २०७६
वडाध्यक्षको कुटाइबाट एक बालक घाइते दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले एक बालकलाई कुटपिट गरेको छ । श्रावण २, २०७६
हेटौंडाका सडक छेउका नाली सफा गर्न चल्यो डोजर श्रावण ३, २०७६ 311